I-APARTMENT PHAMBI KOKUBHALWA KWASECAMBURI - I-Airbnb
I-APARTMENT PHAMBI KOKUBHALWA KWASECAMBURI
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguHelia
Igumbi elijongene neCamburi Beach, elinendawo yokupaka, i-WI-FI kwaye ikufuphi nemivalo kunye neendawo zokutyela. Eli gumbi lihlala linekhitshi elincinci elinezixhobo ezisisiseko ukulungiselela ukutya okunempilo ngokukhawuleza.
Ifulethi elinempahla enethamsanqa kufutshane neendawo zokutyela, imivalo kwaye ijonge eCamburi Beach, enye yeelwandle ezintle kwisixeko saseVitória. Ephahleni, ichibi likumema ukuba uphumle. Iiprothokholi ze-COVID-19 ziyahlonitshwa kwaye siyakwazisa ukuba yonke indlu iyahlanjululwa kutshintsho ngalunye londwendwe.
IJardim da Penha yindawo yokuhlala enazo zonke iziseko eziyimfuneko: iivenkile ezinkulu, iindawo zokutyela, iibhari, iivenkile, iicinema kunye neekliniki. Yonke into isondele kakhulu kule ndawo yokuhlala.
Umbuki zindwendwe ngu- Helia
Ukuba kuyimfuneko, ndiza kufumaneka kwiselfowuni yam.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jardim da Penha